FATF ndepụta mba ndị FATF | ozi nke MILLION MAKERS nyere
FATF Ndepụrụ Mba Ndekọ
Ihe egwu di elu, a na-enyocha ya na ndị na-ejikọtaghị ya
Anyị abụghị onwe anyị ma ọ bụ site na mkpakọrịta anyị, ndị ọrụ anyị, ndị anyị na ha na-arụ ọrụ, ndị na-ahụ maka anyị na ndị nweere onwe anyị anaghị ekwe ka eji ngwaahịa na ọrụ anyị rụọ ọrụ ozugbo ma ọ bụ na-akpaghị aka na mba ndị a kpọtụrụ aha.
A na-emelite ndepụta nke mba dị iche iche oge ụfọdụ ma tinye ya na njikọ a kpọtụrụ aha.
Democratic Ndị Republic of Korea (DPRK)
Agaghị akwado ndị mbịarambịa bi na mba ndị ahụ edepụtara maka ọrụ anyị.
Cheta * FATF na-achọpụta ikike nwere ihe na-esighi ike na nguzozi ebe iji mata ma lụ ọgụ ịkwụ ego na mmebi ego nke ndị na-eyi ọha egwu (CFT / AML) ma wepụta akwụkwọ FATF abụọ maka onye ọ bụla na-enye akwụkwọ ndị a ugboro atọ kwa afọ. Nkwupụta nke FATF na-akpọsa ndepụta nke mba maka onye ọ bụla dara ogbenye / adịghị ike, ọchịchị CFT / AML gosipụtara na ọ dị irè. Ruo Ọktọba 2018, FATF enyochaala ihe karịrị mba 80 ma kọwaa mmadụ 68 n'ime ha n'ihu ọha. N'ime mba 68, mba 55 ewereworị usoro ndị dị mkpa iji lebara adịghị ike ha CFT / AML ma ewepu ha na ndepụta ahụ. Isi iyi * fatf-gafi.org
Ka anyị mara.